Paco Alvarez. Kubvunzana nemunyori we Tiri kupenga vaRoma ava | Zvazvino Zvinyorwa
Paco Alvarez. Kubvunzana nemunyori weTinopenga vaRoma ava
Mifananidzo yakarongedzwa naPaco Álvarez.
Paco valvarez, mutori wenhau anobva kuMadrid, ane chinyorwa chitsva pamusika, Tinopenga, ava vaRoma. Pashure Pasi rakadzika uye nyika y Tiri vaRoma Valvarez anoenderera mberi nekare reRoma mubhuku risinganyepedzere kunge riri nezve Nhoroondo asi nezve zviitiko zvinotaurwa mune inodzidzisa uye inonakidza toni. Iwe unondipa iyi bvunzurudzo, uye ndinokutenda zvikuru kwazvo nenguva yawakapedza uye nemutsa wawakandipinda nawo.
Akazvarirwa mukati Madrid, in 1965uye mutori venhau Kubva makore makumi masere, akaendesawo paTV 2, mudetembi uye muchengeti wezvekuratidzira. Pamusoro pezvo, ane hukama nenyika yangu yeLa Mancha uye ari kufungisisa nezve chirongwa munzvimbo iyoyo. Mukudzidzira kwako kwekutanga Isu tiri maRoma, isu takawanazve iwo roman midzi iyo yatinoramba tiinayo uye yaanoramba achitaura nezvayo mune iri basa nyowani.
PACO ÁLVAREZ: Ini ndinofunga bhuku rangu rekutanga, raive risiri komiki kana bhuku renyambo, raive The Little Prince, iyo ini ndichiri kuverenga. Nyaya yekutanga yandakanyora yaive kapepa yekuratidzwa kwezvivezwa zvevadzidzi mukirasi yangu, pandaive nemakore gumi nemana.
PA: Mabhuku ese anotipa chimwe chinhu. Ehezve, sezvo isu tichava tisina nguva yekuaverenga ese, isu tinofanirwa kusarudza zvakanaka. Zvichida Vanamwari, Makuva uye Vakachenesa, ivo Ceramic, akavhura maziso angu, semwana, kumagariro ekare.
PA: John Slav Galán, Perez-Reverte, Lawrence Silva, Dolores Redondo, Marcus Valerius Martial... Cervanteshongu nehama yake Shakespeare, Plautus, Charles Ruiz-Zafon… Kubva kuna Homer kusvika nhasi, kune vakomana vazhinji vakanaka uye vese vakomana vakanaka ndezvekusingaperi.
AL: Ndeupi munhu wekunyepedzera waungadai uchida kusangana nekugadzira?
PA: Ndinofungidzira zvakawanda. Ndingadai ndaifarira kugovana waini uye yekunakidzwa nayo Alatriste, kana kuve chikamu cheboka re Musha mumabhuku aSilva, wechishanu musketeer, shamwari ya Sandokan, kana kugara mumusha we Asterix. Ndingadai ndakafarira kugadzira mavara mazhinji zvekuti havangakwanise pano.
PA: Nyora; nguva dzose ne mimhanzi. Verenga pese pandinogona. Nguva dzese uye chero kupi.
PA: Kunyora, mangwanani. Kuti ndiverenge, ndinofungidzira husiku.
AL: Uri kutitaurira chii mukati Tave kupenga vaRoma ava?
PA: Ndinotaura nezvazvo kukunda kwekumadokero, ndiko kuti, kweHispania, kuguma kwenyika, iyo yakanyanya kunaka nyika uye inoenderera kumadokero makore mazana maviri nemazana apfuura. Iyo yekushambadzira kuburikidza iyo maIndia madzinza pano akazova akawedzera eRoma kupfuura chero munhu.
AP: zvose. Ini ndinoda novel, nhetembo, kunyangwe kutsikisa kwakanyanya kuoma, asi zvese zvichaenda nemhanza. Zvirokwazvo nepseudonym, kuti urege kusanganisa yakawandisa churras ne merino.
PA: Kuverenga: Munyori, munyori uye chakavanzika chaVictoria naLuis Carlos Hernández kana tiine ruzivo. Zvinotyisa, chitendero. Kunyora: a ngano nyaya kuda kuziva ... zvakanaka, ndinovimba kudaro.
AP: Zvakaoma, asi unofanira kuomerera. Dambudziko nderekuti, sekutaura kwaCervantes, "gore rakazara munhetembo rinowanzova nenzara," uye ikozvino tiri kuwedzera vanyori uye vashoma vashambadzi, vari kubheja, hongu, chete pane inishuwarenzi. Chero zvazvingaitika, ini ndinofunga kuti gumi iri rinozotanga muna Ndira rinenge riri rekufamba, nguva ino kwete mimhanzi, asi yakanyorwa.
PA: Dambudziko? Kupinda kwevatorwa yaive matambudziko. Izvi zvinotyisa, nekuti isu tinoramba tichishandisa matanho kubva kumakore zviuru zviviri apfuura nhasi, asi hapana chichagumisa budiriro yedu, zvirinani, ndinovimba zvakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Paco Alvarez. Kubvunzana nemunyori weTinopenga vaRoma ava